Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ကြွက်နျူကလိယ accumbens (2012) တွင် Fosb ဗီဇသွေးဆောင် primes
comments: ရှည်လျားသောစွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ခြေရာတွေကိုနောက်ကွယ်မှအရွက် deltafosb ကြောင်းအထောက်အထား။ အထူးသစွဲ relapse ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ deltafosb အများကြီးပိုမြန်သော induction မှုကြောင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းလျှင်မြန်စွာအပြည့်အဝလွစွဲပြည်နယ်မှအရှိန်မြင့်လာတယ်နိုင်ပါတယ်ပင်ပြီးနောက်, ဘယ်လို relapsing ရှင်းပြသည်။
J ကို neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2013 ဇန်နဝါရီလ 25 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို neuroscience ။ 2012 ဇူလိုင်လ 25; 32(30): 10267-10272 ။
Diane Damez-Werno,1,§ Quincey LaPlant,1,§ HaoSheng Sun က,1 Kimberly N. Scobie,1 ဒါဝိဒ်သည်အမ် Dietz,1 မှ Ian အမ် Walker က,2 ဂျာ Wook Koo,1 ဗင်းဆင့်အက်ဖ် Vialou,1 ယေဇကျေလ Mouzon,1 Scott ဂျေ Russo,1 နှင့် အဲရစ်ဂျေ Nestler1,*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည် J ကို neuroscience
ΔFosBတစ်ဦး Fosb မျိုးဗီဇထုတ်ကုန်, နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့် putamen (CPU) caudate ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သော induction အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်မြင်ဗီဇထုတ်ဖော်ထစ်အငေါ့ပုံစံများနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာမူမမှန်ကိုအထောက်အကူပြုရန်.
ဤတွင်ကျနော်တို့ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီသမိုင်း၏သွေးဆောင်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ, ရှိမရှိအကဲဖြတ် Fosb နောက်ဆက်တွဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းမျိုးဗီဇ။ ကျနော်တို့တိုးချဲ့ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး, ၏သွေးဆောင်တိုးပွါးကြောင်းပြသ Fosb NAc အတွက်ΔFosB mRNA ပိုမိုစူးရှသော induction နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်း Re-ထိတွေ့ပြီးနောက်ΔFosBပရိုတိန်း၏ပိုမြန်စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သော Prime Fosb သော induction CPU အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်, တကယ်တော့, ΔFosB mRNA ၏နောက်ဆက်တွဲစူးရှသော induction CPU အတွက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။
ဤပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများ Fosb စကားရပ်မှာ chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် Fosb မျိုးဗီဇကမကထ။ မတိုင်မီကနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာခညျြနှော RNA polymerase II ကို (Pol II ကို) အတွက်ကြာရှည်တိုး induces Fosb NAc အတွက်ကမကထသာ, Pol II ကို Prime "တုံ့ဆိုင်းက" အကြံပြုခြင်း Fosb ကိုကင်းမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာဤဒေသတွင် induction များအတွက်။ တစ်ဦးကကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးတော့ပိုပြီးလျင်မြန်စွာဘို့ခွင့်ပြု, ထိုဗီဇကမကထထံမှ Pol II ၏လွှတ်ပေးရန်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း Fosb ကူးယူ။ တစ်ဦးကကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုကိုလည်းမှာဖိနှိပ် histone ပြုပြင်မွမ်းမံလျော့ကျ Fosb NAc အတွက်ကမကထ, ဒါပေမယ့်တိုးထိုကဲ့သို့သောဖိနှိပ်အမှတ်အသားများနှင့်လျှောက်လျော့နည်း CPU အတွက်အမှတ်အသားများကိုသက်ဝင်။
ဤရွေ့ကားရလဒ်များမှာ chromatin ဒိုင်းနမစ်သို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး Fosb ရစေတယ်များအတွက်ဝတ္ထုယန္တရားကမကထနှင့်ထုတ်ဖေါ် Fosb ကိုကင်းမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာ NAc အတွက်သော induction ။
မူးယစ်ဆေးစွဲပြင်းထန်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ကြားမှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Kalivas et al ။ , 2005; Hyman et al ။ , 2006). နှင့် dorsal striatum (သို့မဟုတ် putamen caudate; CPU), မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ striatal အဆောက်အဦများ, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မြဲ ventral striatum အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများ (NAc သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Freeman က et al ။ , 2001; Robinson နဲ့ Kolb, 2004; Shaham နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း, 2005; ဝင်္နှင့် Nestler, 2011). ΔFosB, ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇများက encoded တစ်ဦးခြင်းကိုနှင့်တည်ငြိမ်ပရိုတိန်း, Fosbဒါကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု mediates ဘယ်မှာအလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး, မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့် NAc နှင့် CPU အတွက်သွေးဆောင်ရေတွင်းတစ်တွင်း-စရိုက်လက္ခဏာတွေကူးယူအချက်ဖြစ်ပါသည် (Nestler, 2008) ။ သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့ရှိမရှိကြိုတင်နာတာရှည်ထိတွေ့ΔFosB၏နောက်ဆက်တွဲသော induction မသိသောဖြစ်နေဆဲပွောငျးလဲ။
ကျနော်တို့ (နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တုန့်ပြန် chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံပစ်မှတ်ကဦးနှောက်ဒေသများတွင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏သွေးဆောင်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါမကြာသေးမီကတွေးဆRobison နှင့် Nestler, 2011) ။ တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ phosphorylation, acetylation နှင့် histone အမြီး၏ methylation အပါအဝင်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏မြောက်မြားစွာအမျိုးအစားများ, မှတစ်ဆင့် chromatin ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မှတ်တမ်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Pol II ကို Proximity ကမကထဒေသများမှဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ခညျြနှောငျနှင့်ကူးယူစတင်ဆိုဒ် (TSS န်းကျင်နှင့်အတူဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေကိုပိုမိုမကြာသေးမီအလုပ်, ကြိုတင်သူတို့ရဲ့စကားရပ်ဖို့ "သွေးဆောင်" မျိုးဗီဇ၏ကမကထမှ RNA polymerase II ကို၏စုဆောင်းမှု (Pol II ကို) အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ် )a"ကိုရပ်တန့်" ပြည်နယ် (core နဲ့ Lis, 2008; Nechaev နှင့် Adelman, 2008) ။ အဆိုပါရပ်တန် Pol II ၏ activation ထို့နောက်ကမကထနှင့် TSS ဒေသများနှင့်ဤ "Prime" မျိုးဗီဇ (၎င်း၏ကူးယူခြင်းမှယင်း၏ထွက်ပေါက်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ထင်နေသည်Zeitlinger et al ။ , 2007; Saha et al ။ , 2011; Bataille et al ။ , 2012).
ဤတွင်ကျနော်တို့အနေနဲ့တိုးချဲ့ဆုတ်ခွာကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကင်းရန်ကြိုတင်နာတာရှည်ထိတွေ့ခြင်းသည်, ၏ induciblity ပွောငျးလဲကြောင်းပြသ Fosb CPU မဟုတ်ပါဘူးစဉ် NAc သော induction အဘို့အရစေတယ်ခံနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှမျိုးဗီဇ။ ကျနော်တို့မှာကွဲပြား chromatin လက်မှတ်ပေါင်းထို့နောက်ခွဲခြားသတ်မှတ် Fosb မျိုးဗီဇ NAc အတွက်ကမကထနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထစ်အငေါ့သွေးဆောင်နှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော CPU Fosb မှာရပ်တန့် Pol II ကို၏စုဆောင်းမှုအပါအဝင်ဗီဇ, Fosb Proximity NAc အတွက်ကမကထသာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ဒေသများတွင်အများအပြား activating သို့မဟုတ်ဖိနှိပ် histone ပြုပြင်မွမ်းမံပြောင်းလဲမှုများ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များမှာ chromatin ဒိုင်းနမစ်သို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး Fosb မျိုးဗီဇကမကထနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Pol ၏ II ကို Prime တုံ့ဆိုင်းရာကယန္တရားညွှန်ပြ Fosb ကိုကင်းမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာ NAc အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation သည်။
အထီး Sprague Dawley ကြွက် (250-275 ပါ g; ချားလ်စ်မြစ် Laboratories), အားလုံးစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုတစ် 12 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်တစ်ဦးရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသောခန်းထဲမှာ pair တစုံ-သျောခဲ့ကြသည် (7 pm တွင်ပေါ်ထွန်း) အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်၎င်း, ရေ ကြော်ငြာ libitum။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာကိုကင်း (15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) သို့မဟုတ်ဆား (ip) နဲ့ဆယ်ရက်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်သိနာတောင်ပေါ်မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ (IACUC) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များ 1 နာရီများအတွက်ပထမဦးဆုံးနေ့ locomotor အခန်း habituated, အဲဒီနောက် Photobeam လုပ်ဆောင်ချက်စနစ် (San Diego မှတူရိယာ) သုံးပြီးဆားဆေးထိုးပြီးနောက် locomotor လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ locomotor အခန်းများနေ့ရက်တိုင်းအတွက် 1 နာရီလေ့ပြီးနောက်, ကိုကင်း (15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip)2ရက်ပေါင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနေ့စဉ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ကိုထပ် 1 နာရီများအတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက် 24 နာရီ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ΔFosB / FosB immunoreactivity (ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်Perrotti et al ။ , 2004) ။ အနောက်တိုင်းချေကိုကင်းထိုး FosB (ပြမဟုတ်) သိရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူΔFosBရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးနောက်ΔFosB / FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါငျးတို့သ 24 နာရီသို့မဟုတ်ကြာကြာလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
RNA အထီးကျန်မှုတွေ, ပြောင်းပြန်ကူးယူနှင့် PCR
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ NAc နှင့် dorsolateral / dorsomedial CPU ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် 12-gauge လာကြတယ် (ရရှိသောခဲ့ကြသည်Perrotti et al ။ , 2004), ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေ protocols များ (အဆိုအရလုပ်ငန်းများ၌Covington et al ။ , 2011) ။ ΔFosBနှင့် FosB mRNA isoform တိကျတဲ့ΔFosBနှင့် FosB primer (နဲ့အတူအရေအတွက် PCR (qPCR) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည်Alibhai et al ။ , 2007) ။ ΔFosBနှင့် FosB mRNA အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းထိတွေ့မှု (ပြမပါ) အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့ပြီးသော GAPDH mRNA အဆင့်ဆင့်မှပုံမှန်ရှိကြ၏။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ NAc နှင့် CPU လာကြတယ်အထက်တွင်အဖြစ်စုဆောင်းနှင့်အနောက်တိုင်းချေဘို့လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် (Covington et al ။ , 2011), ERK44 / 42 [extracellular signal ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase-44 / 42] နှင့် phosphoERK44 / 42 (အခွင့်အရေး), AKT [thymoma ဗိုင်းရပ်စ် proto-oncogene] နှငျ့ကို p-AKT, SRF (သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်), နှင့် pSRF, CREB ဆန့်ကျင်ပဋိသုံးပြီး နှင့် pCREB [ပရိုတိန်း binding စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်] ။ တစ်ဦးချင်းစီလမ်းသွားပေါ်သို့ပေါစနှေငျ့ပရိုတိန်းပမာဏကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြရသော actin သို့မဟုတ် tubulin ၏အဆင့်ဆင့်မှပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Chromatin immunoprecipitative (chip)
လောလောလတ်လတ် (NAc ခွဲဖြာနှင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ CPU လာကြတယ် chip အဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်အခွအေနေတိရစ္ဆာန်များ၏လွတ်လပ်သောအုပ်စုများထံမှ triplicate အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို chip နမူနာများအတွက်နှစ်နိုင်ငံ NAc နှင့် CPU လာကြတယ်ငါးခုကြွက် (10 လာကြတယ်) မှထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခဲ့ကြသည်။ တိကျတဲ့ histone ပြုပြင်မွမ်းမံအတှကျအသုံးပွုအဆိုပါပဋိပစ္စည်း (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေကိုကဲ့သို့တူညီသောကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဝင်္ et al ။ , 2010); Pol II ကိုမှပဋိပစ္စည်း (CTD) ထပ်ဒေသ (Pol II ကို-pSer5) abcam5မှရရှိသောခဲ့သည်ယင်း၏ carboxyl terminal ကိုဒိုမိန်း၏ Ser5131 မှာ phosphorylated ။ chip primer လေးအစုံများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ Fosb (Lazo et al ။ , 1992; Mandelzys et al ။ , 1997): 1F: GTACAGCGGAGGTCTGAAGG, 1R: GAGTGGGATGAGATGCGAGT; 2F: CATCCCACTCGGCCATAG, 2R: CCACCGAAGACAGGTACTGAG; 3F: GCTGCCTTTAGCCAATCAAC, 3R: CCAGGTCCAAAGAAAGTCCTC; 4F: GGGTGTTTGTGTGTGAGTGG, 4R: AGAGGAGGCTGGACAGAACC ။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ chromatin ပြုပြင်မွမ်းမံ၏အဆင့်ဆင့် input ကို DNA ကိုများအတွက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နေကြတယ် (ဝင်္ et al ။ , 2010).
အစီရင်ခံအားလုံးတန်ဖိုးများကို locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆဲလ်ရေတွက်ဘို့ဒေတာ± sem ±အချက်များအဖြစ်ကုသမှုနှင့်ဆေးထိုးနှင့်အတူ Two- လမ်း ANOVAs အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ qPCR စမ်းသပ်ချက်များကိုအချက်တစ်ချက်အနေဖြင့်ကုသမှုဖြင့်တစ်နေရာတည်းရှိ ANOVA များကအချိန်တစ်ကြိမ်စီဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများ (p <0.05) ကိုလေ့လာသောအခါ Bonferroni သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆားငန်ဆေးဖြင့်ကုသသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့် (ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းမဲ့သည့်ကိုကင်းကုသသည့်တိရိစ္ဆာန်များကိုပုံနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ရန် Bonferroni စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မဖြောင့်မတ်သောနှစ်ချောင်းရှိသော Student t-tests ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် Western blotting နှင့် ChIP data အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သာ. ကွီးမွတျ ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်၏ Fosb NAc အတွက်သွေးဆောင်သော်လည်း CPU,
၏သွေးဆောင်အပေါ်ဆုတ်ခွာတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကင်းတဲ့ကြိုတင်နာတာရှည်သင်တန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဆနျးစစျဖို့ Fosb တစ်နောက်ဆက်တွဲကင်းစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်ဗီဇ, 15 နေ့ရက်ကာလအဘို့ယခင်ကဆားသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ် ip ထိုးသွင်းခဲ့ကြွက် (10 / ကီလိုဂရမ် mg) (ရုပ်သိမ်းရေး၏ 28 ရက်အကြာမှာမူးယစ်ဆေးဝါး၏စိန်ခေါ်မှုဆေးများပေးခဲ့သင်္ဘောသဖန်း 1A) ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကြိုတင်ကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးမျှော်လင့်ထားသည့်ရေရှည်တည်တံ့အကျိုးဆက် locomotor အကဲဆတ်ခြင်း induction အတည်ပြုပေးရန်တိရစ္ဆာန်များ၏တဦးတည်းအုပ်စု locomotor တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာ။ ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံနှင့်-naïveကြွက်သူတို့ရဲ့ရွေ့လျားတိုးပွားလာမူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များမှတစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု (အတူညီမျှအခြေခံ locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသသင်္ဘောသဖန်း 1B။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံ Two-လမ်း ANOVA, ကုသမှု: F ကို1,66 = 30.42, p <0.0001; ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F2,66= 58.39, p <0.0001; ကုသမှု x ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F2,66= 8.56, p = 0.0005, Bonferroni Post-စမ်းသပ်မှု ^p <0.001) ။ ဤသည်ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုသည်ကိုကင်းအတွေ့အကြုံရှိကြွက်များတွင် (ဥပမာ - Bonferroni Post-tests * p <0.001) တွင်ပိုမိုသောလှုပ်ရှားမှု၊
locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Fosb မူးယစ်ဆေးမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာ NAc နှင့် CPU အတွက်သော induction
NAc နှင့် CPU အတွက်ΔFosBစကားရပ်ပေါ်မှာဤကင်း-pretreatment regimen ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်မှကျနော်တို့ 24, 0, 1, ဒါမှမဟုတ်3နေ့စဉ်ကင်းစိန်ခေါ်မှုနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်ကိုကင်း-ရင်တော့မှားမယ်နှင့်ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များပြီးနောက်6နာရီ immunohistochemical နည်းလမ်းများနှင့်အတူΔFosBပရိုတိန်းတိုင်းတာ ထိုးဆေး (15 ကီလိုဂရမ် / mg; တွေ့မြင် သင်္ဘောသဖန်း 1A) ။ ယခင်ကထူထောင်အဖြစ် (Nye et al ။ , 1995), (3 ကင်းထိုးသိသိသာသာမူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc နှင့် CPU အတွက်ΔFosBပရိုတိန်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်နှင့်၎င်း၏စုဆောင်းခြင်းကိုကင်းဆေးထိုး၏6ရက်အကြာမှာသိသိသာသာကျန်ရစ်သင်္ဘောသဖန်း 1C။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံ Two-လမ်း ANOVA, NAc core ကို, ကုသမှု: F ကို1,28= 23.5, p <0.0001; ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 49.16, p <0.0001; ကုသမှု x ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 6.83, p = 0.0014; NAc shell ကို, ကုသမှု: F ကို1,28= 18.69, p <0.0001; ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 31.52, p <0.0001; ကုသမှု x ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 3.21, p <0.05; CPU၊ ကုသမှု - F1,28= 9.47, p <0.001; ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 19.74, p <0.0001; ကုသမှု x ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု: F3,28= 0.94, p> 0.05 ။ NAc core, shell, နှင့် CPu, Bonferroni Post-tests ^p <0.05) ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များတွင် (၂၈) ရက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးသည့်နောက် NAc (သို့) စီပီတွင် inFosB ductionFosB ကိုဆက်တိုက် evidence ဆက်နွှယ်နေသည့်အထောက်အထားမရှိပါ။Nye et al ။ , 1995), အကြောင်းပြချက်ဤအချိန်အမှတ်ကဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သိသိသာသာသို့သော်3သို့မဟုတ်6ကင်းစိန်ခေါ်မှုထိုးခံသောကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ, core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးငျဒသေအတွက်သိသာတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု NAc အတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ΔFosBပရိုတိန်းသော induction ပြသ (သင်္ဘောသဖန်း 1C။ Bonferroni Post- စမ်းသပ်မှု * p <0.05) ။ ဆနျ့ကငျြ, uFosB ပရိုတိန်းမျှထိုကဲ့သို့သောသာ။ ကြီးမြတ်သော induction CPu အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်; အစားကိုညီမျှသော osFosB သောသော induction ကိုကိုကင်း - သုံးပါးသို့မဟုတ် ၆ ရက်ကြာမှကင်းကိုစိန်ခေါ်မှုနှင့်ကင်းသောအတွေ့အကြုံရှိသောကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။သင်္ဘောသဖန်း 1C).
တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန် NAc နှင့် CPU ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေသည့်မှတ်တမ်းကိုပြောင်းလဲသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ရန်, ငါတို့ပေးသောတစ်ခုတည်းကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားဆေးထိုးအပေါ်သို့ΔFosBနှင့် FosB mRNA မှတ်တမ်း၏သွေးဆောင်၏အချိန်သင်တန်း (45, 90 နှင့် 180 မိ) ကိုလေ့လာ ဆုတ်ခွာ၏ 28 ရက်အကြာမှာကင်း-ရင်တော့မှားမယ်နှင့် -experienced ကြွက်မှ (ကြည့်ရှု သင်္ဘောသဖန်း 1A) ။ တစ်ဦးဆားစိန်ခေါ်မှု, ကိုကင်း-ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc နှင့် CPU နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အားလုံးသုံးအချိန်အချက်များမှာΔFosBနှင့် FosB mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်လျင်မြန်စွာတိုး (သွေးဆောင်တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုမှဆွေမျိုးသင်္ဘောသဖန်း 1D။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအတိုင်းအတာအချိန်မှတ်နှုန်းတလမ်းတည်းဖြင့် ANOVA; Bonferroni Post-စမ်းသပ်မှု ^p <0.05) ။ NAc တွင်ကိုကင်းကိုစိန်ခေါ်မှုအပြီးကိုကင်း - နုံကျသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းအတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်ပိုမိုကြီးမားသော osFosB နှင့် FosB mRNA သော induction ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်လျော့နည်းသွားသည်။သင်္ဘောသဖန်း 1D။ Bonferroni Post-စမ်းသပ်မှု %p = 0.08, * p <0.05) ။
ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်၏ NAc နှင့် CPU အတွက်အထက်အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ
၏ပြောင်းလဲသွေးဆောင်ဘို့တဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက် Fosb NAc နှင့် CPU အတွက်မျိုးဗီဇကိုကင်းများ၏ကြိုတင်နာတာရှည်သင်တန်းကိုကင်းထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီသမိုင်း၏အထက်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်ပြအတွက်ရေရှည်တည်တံ့အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှါဖြစ်ပါသည်အပြီး Fosb တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုထို့နောက်တစ်ထစ်အငေါ့ဒီဂရီဖို့ဗီဇ induces ထိုကဲ့သို့သောဗီဇသော induction ။ ဒီအယူအဆလေ့လာဖို့, ကျနော်တို့ (မကြာသေးမီကပြခဲ့ကြကြောင်းနှစ်ခုကူးယူအချက်များ, SRF နှင့် CREB အဲဒီဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosB၏ကင်းသော induction လိုအပ်ခံရဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာVialou et al ။ , 2012) အထက်ပရိုတိန်း kinases, ERK နှင့် AKT လည်းကင်းအရေးယူမှု်ပတ်သက်နေ (နဲ့အတူValjent et al ။ , 2000; lu et al ။ , 2006; Boudreau et al ။ , 2009) ။ ကျနော်တို့၏ပြောင်းလဲ induciblility ရှင်းပြနိုင်သောထိုအမျိုးမျိုးသောပရိုတိန်း၏စုစုပေါင်းသို့မဟုတ် phosphorylated အဆင့်ဆင့်အတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲ detect လုပ်ဖို့ပျက်ကွက် Fosb အဘယ်သူမျှမ SRF အတွက်အပြောင်းအလဲ CREB, ဒါမှမဟုတ် AKT အပါအဝင်လေ့လာသူများ (သင်္ဘောသဖန်း 2B, C,) ။ တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန် NAc အတွက် pSRF နှင့် pCREB အတွက်ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းနှစ်ဦးစလုံးသာနာတာရှည်ကိုကင်းများကသိသိသာသာသွေးဆောင်ထားကြောင်းကိုတွေ့ရာလတ်တလောအစီရင်ခံစာ, (နဲ့အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Vialou et al ။ , 2012).
ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်း NAc အတွက်အထက်မော်လီကျူးအချက်ပြကက်စကိတ်အပေါ်ထိတွေ့မှုနှင့် CPU ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
မူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc နှင့် CPU တစ်ခုကနဦးမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက် 20 မိ (ခုနှစ်တွင်သင်္ဘောသဖန်း 2A), တစ်ခုတည်းကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု pERK42 / 44 (များ၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့သင်္ဘောသဖန်း 2B, C,။ နှစျခုအမြီးကျောင်းသား t-test: * p <0.05) ။ ကိုကင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သောက်ပြီးနောက်ဤဒေသများတွင် pERK အဆင့်တိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။Valjent et al ။ , 2000) ။ ဤ (ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိုးရာမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc အတွက် ERK phosphorylation ဆန်းစစ်သည်အခြားစာတမ်းများမှနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲသည်Boudreau et al ။ , 2007; Shen et al ။ , 2009), ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအခွင့်အရေး၌ရှိသကဲ့သို့ဆုတ်ခွာ၏ 28 ရက်အကြာမှာနှင့်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် quantified ခဲ့သည်။ ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုကင်းကြုံနေရမူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ, ကိုကင်းမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုမှဆွေမျိုး, ဆုတ်ခွာ၏ 28 ရက်အကြာမှာ, (CPU အတွက် pERK42 / 44 အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာတိုးစေသောသင်္ဘောသဖန်း 2B, C,။ နှစျခုအမြီးကျောင်းသား t-test: * p <0.05) ။
မှာ Chromatin ရှုခင်း ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်၏ NAc နှင့် CPU အတွက် Fosb ဗီဇကမကထ
ကျနော်တို့လာမယ့်အတွက်အပြောင်းအလဲများရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး Fosb မျိုးဗီဇသွေးဆောင်သည်၎င်း၏ chromatin ဖွဲ့စည်းပုံမှာမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ chip histone ပြုပြင်မွမ်းမံသုံးခုကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေပုံစံများကိုဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားထားပဋိသုံးပြီး NAc နှင့် CPU ပေါ်မှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်: histone H4 ၏ Lys3 (H3K4me3) ၏ trimethylation ဗီဇ activation နဲ့ဆက်စပ်နှင့် H3K27me3 နှင့် H3K9me2 ဗီဇဖိနှိပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်။ တိရိစ္ဆာန်များအကြာတွင် 28 နာရီဆန်းစစ်နှင့်အတူကျနော်တို့ (ကိုကင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်နှင့်အတူဖြစ်စေဆုတ်ခွာ၏ 1 ရက်အကြာမှာကင်း-ရင်တော့မှားမယ်နှင့် -experienced ကြွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်္ဘောသဖန်း 3A) ။ NAc အတွက်ကျနော်တို့မှဤသုံးပါး histone ပြုပြင်မွမ်းမံမဆို၏စည်းနှောင်မရှိသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ရှိရ Fosb တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု၏မရှိခြင်းအတွက်မျိုးဗီဇကမကထ, H3K9me2 ၏လျော့ချအဆင့်ဆင့်များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ် (ရှိခဲ့ပေမယ့်သင်္ဘောသဖန်း 3B-D ကို။ နှစ်ဦးကကျောင်းသား t-စမ်းသပ် tailed ။ #သက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးနုံထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ် p = 0.2) ။ ဒီအကြိုးသကျရော (ကကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်သိသာဖြစ်လာသည်နှင့်မျိုးဗီဇ၏ Proximity ကမကထဒေသများအတွက်တိကျသောခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 3C။ * p <0.05) ။ အချို့သောမျိုးဗီဇများတွင် H3K9me2 ပမာဏသည်အလွန်နည်းပါးသော်လည်း၊ Fosb မျိုးဗီဇကမကထ (ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် NAc ၌ဤအမှတ်အသား၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးအဆင့်ဆင့်ကိုပြသဝင်္ et al ။ , 2010မှမပြ, ဒေတာ) ။ ဆနျ့ကငျြ, CPU အတွက်ကျနော်တို့ binding H3K4me3 အတွက်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့် H3K27me3 အတွက်တိုးမှာ, binding Fosb တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု၏မရှိခြင်းအတွက်ကမကထ, သက်ရောက်မှု (ထိုစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသင်္ဘောသဖန်း 3D။ * p <0.05) ။
၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု Prime အပေါ်ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Fosb NAc နှင့် CPU အတွက်မျိုးဗီဇ
ကျနော်တို့ဘေးကမှ binding Pol II ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး Fosb ယင်း၏ CTD ထပ်ဒေသတွင်း၌ SER5မှာယင်း၏ phosphorylation ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသော TSSs မှာ Pol II ကို၏တုံ့ဆိုင်းကြောင်းဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု၌မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဗီဇ, (နိဒါန်းကိုကြည့်ပါ) မျိုးဗီဇ၏ Prime နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကျနော်တို့အရှင်မှ binding Pol II ကို-pSer5 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Fosb အဆိုပါမျိုးဗီဇလေးကွဲပြားဒေသများမှာ (သင်္ဘောသဖန်း 3B) ။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာ Pol II ကို-pSer5 တစ်သိသိသာသာသန့်စင်ထင်ရှား Fosb ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှု၏မရှိခြင်းအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်၎င်း၏ Proximity ကမကထဒေသမှာကင်း-အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက်၎င်း၏ TSS န်းကျင်မျိုးဗီဇ, (သင်္ဘောသဖန်း 3E။ * p <0.05) ။ ဤသည်သန့်စင်နှစ်ခုမျိုးဗီဇခန္ဓာကိုယ်ဒေသများမှာသိသာမဟုတ်ခဲ့ပေ Fosb, ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်စနစ်များမှာဖော်ပြထားတဲ့ Pol II ကိုတင်းကုပ်နှင့်ကိုက်ညီ။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်, Pol II ကို-pSer5 နေဆဲ binding မှာ, သိသိသာသာသော်လည်းမရှိတော့, သန့်စင်၏အရိပ်လက္ခဏာပြသ Fosb Proximity ကမကထဒေသ (သင်္ဘောသဖန်း 3E. %p = 0.1), ဒါပေမယ့် TSS မှာအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်သို့ပြန်သွား၏။ CPU အတွက်တွေ့ရှိချက် Pol II ကို-pSer5 မရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံလေ့လာ binding နှင့်အတူပိုမို variable ကိုဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်စည်းမျဉ်းအသစ်သောစထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ Fosb ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့ခြင်း၏ချုပ်ရာပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်။ ကျနော်တို့ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပြန်ဆိုကြောင်းပြသ Fosb မူးယစ်ဆေးမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာΔFosB၏ပိုမြန်စုဆောင်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့ NAc ပိုမိုသွေးဆောင်ဗီဇ။ NAc အတွက်ΔFosBသော induction ကင်းမှထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု mediates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (၏သဘောအရဆိုလျှင်ပေးထားNestler, 2008), ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုများပိုမိုလျင်မြန်စွာ reinstatement များအတွက်ဝတ္ထုယန္တရားထုတ်ဖေါ်။
ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB၏တိုးမြှင်သော induction မှာ chromatin အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြ Fosb သာ. ကွီးမွတျသော induction အဘို့အချုပ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဗီဇ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ၏4ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ပစ္စုပ္ပန်သောမျိုးဗီဇ၏ Proximity ကမကထနှင့် TSS ဒေသများသို့ binding တိုးလာ Pol II ကိုပြသပါ။ အဆိုပါ TSS မှာထိုသို့သော Pol II ကိုသန့်စင်ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုအပေါ်သို့လျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် Fosb သော induction, Pol II ကိုရပ်တန့်ကြောင်းဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီ (နိဒါန်းကိုကြည့်ပါ) ဗီဇကို Activation အပေါ်သို့ TSSs ကနေဖြန့်ချိသည်။ တစ်ဦးကကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုလည်းဗီဇဖိနှိပ်မှု-ဖို့ဒ H3K9me2-အမှတ်အသားတစ်ခု၏ binding အတွက်လျင်မြန်စွာကျဆင်း induces Fosb ကမကထ။ ဆနျ့ကငျြကျနော်တို့တော်တော်များများကူးယူအချက်များ၏, ဒါမှမဟုတ်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လူသိများကြသည်သူတို့ရဲ့အထက် kinases ၏အဘယ်သူမျှမတည်မြဲသော induction တွေ့ရှိ Fosb ကိုကင်းများကသော induction ။ ဤရလဒ်သည် NAc အတွက်ΔFosB၏တိုးမြှင်သော induction ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု Prime မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆကိုထောကျပံ့ Fosb အထက်ဖြစ်ရပ်များ၏ upregulation ကနေတဆင့်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မဟုတ်ပါဘူး။
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကို CPU များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ မှာတုံ့ဆိုင်း Pol II ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည် Fosb ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များတွင်ကြိုတင်တစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုရန်, မျိုးဗီဇဖိနှိပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသေးငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာ histone ပြုပြင်မွမ်းမံရှိခဲ့သည်ပေမယ်: H3K27me3 binding တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှောင် H3K4me3 လျော့နည်းသွားသည်။ အထက်ကူးယူအချက်များသို့မဟုတ်လျှော့နှင့်ကိုက်ညီ kinases မပြောင်းလဲမှုကိုလည်းရှိခဲ့သည် Fosb သော induction ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံလြော့ဖို့အစေခံကြောင်းအကြံပြု Fosb NAc များ၌တွေ့မြင် Prime မတူဘဲအတွက် CPU အတွက်မျိုးဗီဇသွေးဆောင်။ ဤအသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာΔFosB mRNA သော induction ဖိနှိပ်နေချိန်မှာသို့သော်, ΔFosBပရိုတိန်း၏စုဆောင်းခြင်းအတွက်အရှုံးမရှိပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝိရောဓိအခြေခံအဆိုပါယန္တရားယခုထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိကျသောမျိုးရိုးဗီဇမှာ chromatin ရှုခင်းမြားတှငျပွောငျးလဲချုပ်ရန်အစေခံခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှပြန်လည်ထိတွေ့မှုအပျေါမှာနောက်ဆက်တွဲသော induction ဘို့သူတို့အားမျိုးဗီဇတုံးဘယ်မှာမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ အဖြစ်ရှုမြင်ခံရနိုင်သောဤသို့သော chromatin အပြောင်းအလဲများ, "ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအမာရွတ်များ," မျိုးဗီဇ၏ပုံမှန်-ပြည်နယ် mRNA အဆင့်ဆင့်၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်လွဲချော်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်စွဲလမ်း၏ပီဂြီနိုမျစရိုက်လက္ခဏာတွေသစ်ကိုကုသများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တူးဖော်ရနိုင်သောရောဂါ၏မော်လီကျူး pathogenesis အကြောင်းကိုလတ်ဆတ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ကတိပေးပြောကြားသည်။
Alibhai IN, အစိမ်းရောင်က TA, Potashkin ဂျာ Nestler EJ ။ fosB နှင့် DeltafosB mRNA စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: Vivo နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 2007;1143: 22-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bataille AR, Jerónimoကို C, Jacques PE, Laramee L ကို, Fortin ME, သစ်တောတစ်ဦးက, Bergeron M က, Hanes SD ကရောဘတ်အက်ဖ်တစ်ဦးက Universal RNA Polymerase II ကို CTD Cycle Gene တလျှောက် Kinase, Phosphatase နှင့် Isomerase အင်ဇိုင်းများအကြား Complex ဆက်စပ်မှုတွေများကကြိုးကိုင်သည်။ Mol ဆဲလ်။ 2012;45: 158-170 ။ [PubMed]
Boudreau AC အ, Reimers JM, Milovanovic M က, ME Wolf ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာဆဲလ်မျက်နှာပြင် AMPA receptors ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုး accumbens ပေမယ် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် Internalize အတွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10621-10635 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Boudreau AC အ, Ferrario CR, Glucksman MJ, ME Wolf ။ လမ်းကြောင်း adapter နဲ့ကင်းဖို့အမူအကျင့်ာင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဝတ္ထုပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးကအလွှာဟာအချက်ပြ။ J ကို Neurochem ။ 2009;110: 363-377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
core LJ, Lis JT ။ RNA polymerase II ၏ကမကထ-Proximity pause မှတဆင့်ကူးယူမှတ်တမ်းတင်စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 2008;319: 1791-1792 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ Sun က H ကို, Bomze HM, DeMaio KD, Wu EY, Dietz DM, Lobo MK, Ghose S က, Mouzon အီး, Neve RL, Tamminga, CA, Nestler EJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှကင်း-သွေးဆောင်အားနည်းချက်အတွက်ဖိနှိပ် histone methylation တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011;71: 656-670 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Freeman က WM, Nader, MA, Nader SH, Robertson က DJ သမား, Gioia L ကို, Mitchell က SM, Daunais JB, Porrino LJ, Friedman DP, Vrana Ke ။ Non-လူ့မျောက်နျူကလိယထဲမှာနာတာရှည်ကင်း-mediated အပြောင်းအလဲများကိုဗီဇစကားရပ် accumbens ။ J ကို Neurochem ။ 2001;77: 542-549 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006;29: 565-598 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;45: 647-650 ။ [PubMed]
Lazo PS, Dorfman K ကို Noguchi T က, Mattei MG, အ fosB ဗီဇ၏ Bravo R. ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မြေပုံ။ FosB အဆိုပါ fosB ကမကထများ၏လှုပ်ရှားမှု downregulates ။ Nucleic Acid Res ။ 1992;20: 343-350 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
lu, L, Koya အီး, Zhai H ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Shaham Y. ကိုကင်းစွဲအတွက် ERK ၏အခန်းက္ပ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29: 695-703 ။ [PubMed]
Mandelzys တစ်ဦးက, Gruda MA, Bravo R ကို, မော်ဂန် JI ။ တစ်ဦးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ခြီးမွှောကျ 37 KDA fos-ဆက်စပ်ကိုပဲနှင့် kainic အက်ဆစ်-ကုသ fosB တရားမဝင်သောကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက် AP-1 ကဲ့သို့ DNA ကို-binding လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 5407-5415 ။ [PubMed]
ဝင်္ငါ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းမှု၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုရှုခင်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2011;1216: 99-113 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nechaev S က, Adelman K. Promoter-Proximity Pol II ကို: အမြန်နှုန်းသောအရာတို့ကိုဖွင့်တုံ့ဆိုင်းရသောအခါ။ cell Cycle ။ 2008;7: 1539-1544 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology 47 ပျော့ပျောင်း။ 2004;1: 33-46 ။ [PubMed]
Robison AJ, Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011;12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Saha RN, Wissink EM, Bailey ER, Zhao နှင့် M က, တဖက်, DC, Hwang JY, Daigle KR, Fenn JD, Adelman K ကို Dudek သည် SM ။ Arc နှင့်အခြား IEGs ၏လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှု-သွေးဆောင်ကူးယူမှန်မှန် RNA polymerase II ကိုအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ နတ် neuroscience ။ 2011;14: 848-856 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shaham Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့ relapse အတွက် neuroadaptations ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1437-1439 ။ [PubMed]
Shen HW, Toda က S, Moussawi K ကို Bouknight တစ်ဦးက, Zahm DS, Kalivas PW ။ ကိုကင်း-ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲ dendritic ကျောရိုး plasticity ။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 2876-2884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Valjent အီး, Corvol JC, စာမျက်နှာများကို C, Besson MJ, Maldonado R ကို, ကိုကင်း-ဆုချီးဂုဏ်သတ္တိများများအတွက် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase အဆငျ့ဆငျ့၏ Caboche ဂျေပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 8701-8709 ။ [PubMed]
Zeitlinger J ကို, Stark တစ်ဦးက, Kelly M က, ဟောင်ကောင် JW, Nechaev S က, Adelman K ကို Levine က M, Young က RA ။ RNA polymerase အဆိုပါ Drosophila melanogaster သန္ဓေသားအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုမျိုးဗီဇမှာတုံ့ဆိုင်း။ နတ်မျိုးဗီဇ။ 2007;39: 1512-1516 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vialou, VF, Feng တို့ဂျေ, Robison AJ, ဖာဂူဆန်: D, Scobie KN, Mazei-Robison M က, Mouzon အီး, Nestler EJ ။ သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်နှင့်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံးΔFosB၏ကင်းသော induction ဘို့လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2012 လက်ခံခဲ့သည်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]